कपिलले पत्रकारसँग मागे एक अर्ब क्षतिपूर्ति माग - Everest Times UK
Kapil Sharma during press conference of Zee TV's Star Ya Rockstar at hotel Hometel in Industiral Area Ph-1 of Chandigarh. *** Local Caption *** Kapil Sharma during press conference of Zee TV's Star Ya Rockstar at hotel Hometel in Industiral Area Ph-1 of Chandigarh. Express Photo by kamleshwar Singh / chandigarh
कपिलले पत्रकारसँग मागे एक अर्ब क्षतिपूर्ति माग
भारतीय कमेडियन कपिल शर्माले बुधबार एक इन्टरटेनमेन्ट न्यूज पोर्टल र त्यसका पत्रकार विक्की लालवानीमाथि आफ्नो चरित्रहत्या गरेको आरोपमा एक अर्ब भारु क्षतिपूर्ति माग गर्दै कानूनी नोटिस पठाएका छन् । उनले नोटिसप्राप्त गरेको सात दिन भित्र सार्वजनिकरुपमा बिना सर्त माफी माग्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
पब्लिकेसनले आफ्नो विरुद्ध अपमानजनक, घृणायुक्त समाचार र विचारहरु प्रशारण गरेको कपिलको आरोप छ । उनले यस्ता सामग्रहरु तत्काल हटाउनुपर्ने बताएका छन् । यी सामग्रीले आफ्नो छवि विगारेको भन्दै १ अर्ब भारुको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने माग उनले गरेका हुन् ।
कपिलका वकिल तनवीर निजामले कानूनी नोटिस पठाइएको पुष्टि गरे । उनले भने, ‘न्यूज पोर्टल सम्पादक विक्की लालवानीले मेरो क्लाइन्टलाई बदनाम गरे, त्यसैले हामीले सात दिनभित्र सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नका लागि कानूनी नोटिस पठाएका छौं । यदि माफी नमागेको खण्डमा हामी उनीमाथि आपराधिक कारवाहीको प्रक्रियामा जाने छौं ।’ यो विवाद अघिल्लो महिनादेखि सुरु भएको हो । कपिलले लालवानीलाई गालीगलौज गरेको एउटा अडियो कल सार्वजनिक गरेका थिए ।
‘म त हजुर परदेशमा…’ गीत सार्वजनिक [भिडियोसहित]